स्वास्थ्य सन्देश Archives - jagritikhabar.com
बिहान उठ्ने बित्तिकै मानिसको शारिरिक स्फूर्ति आइसकेको हुदैन भने हाम्रो मेटाबोलिज्मले पनि भर्खर मात्रै गति लिन थालेको हुन्छ । यस्तोमा हाम्रो सामान्य खुवाइले पनि यसलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउँछ । यसका लागि मह र कागती मिसाएको तातोपानीको विशेष महत्व हुन्छ । यहाँ हामीले बिहानै तातोपानीमा...
चाया बाट छुट्कारा पाउनका लागि अपनाउनुहोस ५ सजिला उपाय
के तपाई चाया को समस्याले गर्दा तनावमा हुनुहुन्छ ? चाया सरुवा रोग होइन । चायाको समस्या देखिने दर हाम्रो मुलुकमा भने अझ बढी छ । चिकित्सा तथ्यपत्र अनुसार, सेतो धूलोको कणजस्तै देखिने चाया एक प्रकारको निर्जीव छाला हो, जुन कपालको जरो छेउछाउ जम्मा हुन्छ...
के तपाई विर्य धेरै फाल्नु हुन्छ ? के हुन्बेछ बेला बेला मा विर्य नफल्दा – अवस्य पढ्नुहोस
काठमाडौं । बिर्यमा प्रजनन क्षमताका लागि आवश्यक शुक्रकीट हुने भएकाले नै यसले बढी नै महत्त्व पाएको छ।सांकेतिक रूपमा हेर्दा जन्मको सुरुवात हुने बीजका रूपमा कार्य गर्ने भएकाले यसले पाएको महत्त्व जायज नै लाग्छ।यो शक्ति आफैंमा ठूलो तथा महत्त्वपूर्ण छपोषणका दृष्टिले हेरिने शक्तिको कुरा गर्दा...
खाली पेटमा के खाने के नखाने ? यस्ता छन् विज्ञका सुझाव
खानपिनको सिधा सम्बन्ध मानवको स्वास्थ्यसँग जोडिएको हुन्छ । सामान्यतया मानिसहरु खानपिनमा ध्यान दिने गर्दैनन् । अझ घरायसी र बाहिरी काममा उत्तिकै सक्रिय हुने महिलाहरुले स्वस्थकर खानामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । साधारणतया धेरै मानिसहरु बिहानै खालि पेटमा कुन खाना खान हुने वा नहुने भन्नेमा अल्मलिएका...
गर्भ नबस्ने ९ कारण यस्तो छ हेर्नुस काम लाग्न सक्छ !
काठमाडौं । औसतमा जँचाउन आउने २ सय महिलामध्ये दुईजनामा बाँझोपनको समस्या देखिन्छ । त्यसमा धेरैजसो पुरुषभन्दा महिलाकै स्वास्थ्यका कारण गर्भ नबसेको देखिन्छ । समस्या लिएर अस्पताल आउनेहरुको संख्या हेर्दा चार महिलामध्ये एकजनाको गर्भ नरहनुको कारण पुरुषमा रहेको स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ भने ३ जनाको समस्या...
काठमाडौँ । मृगौला स्वस्थ रहनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकि मृगौलाले हाम्रो शरीरमा उपस्थित सबै फोहोर हटाउने काम गर्दछ, यसैले आज हामी तपाईलाई केहि मिर्गौला फेल हुनु भन्दा पहिले शरीरमा कस्ता लक्षणहरू देखा पर्न सक्छ भनेर बताउन जाँदैछौं। मिर्गौला वरिपरि दुखाइ यदि एक व्यक्तिले मिर्गौला...
जाडो भगाउन जाँड रक्सी नखान चिकित्सकको सुझाव, हृदयघात भइ ज्यान नै जान सक्ने
काठमाण्डाै । चिसो समयमा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएकाले विशेष ख्याल गर्न डाक्टरको सुझाव छ । चिसोमा दम, मुटु तथा फोक्सो सम्बन्धी समस्या भएका दीर्घ रोगीलाई जोखिम धेरै हुने भएकाले उनीहरुलाई चिसोबाट जोगाउन डाक्टरले सुझाव दिएका हुन् । चिसोको समयमा तातो...
मधुमेहलाई जरैदेखि हटाउने सजिलो उपाय र आर्युवेदिक औषधी !
काठमाडौं । हरेक नेपालीको घरमा कोहि न कोहि मधुमेहका रोगी हुनसक्छन् । मधुमेहलाई नेपाली समाजमा ‘खानदानी रोग’ भनिन्छ । खानदानी यस अर्थमा कि,सुख-सयाल वा ऐश आरमपूर्ण जीवन विताउनेहरु यस रोगको सिकार हुनेगर्छन् । मिठो मसिनो खाने, आरमपूर्वक बस्ने, निस्त्रिmय रहनेहरुलाई मधुमेहको जोखिम हुन्छ ।...
के तपाईं वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ? यसरी हल गर्नुहोस् मानसिक तनाव
काठमाडौं। यही साउन महिनामा कुवेतमा कार्यरत एक नेपाली महिला कामदारले पंखामा झुन्डिएर आत्महत्या गरिन्। स्थानीय प्रहरीका अनुसार उनी साल्मियाको एउटा अपार्टमेन्टमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन। उनले आत्महत्या गर्नुको कारण के थियोे? त्यो हालसम्म खुल्न सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत पुगेर कुनै नेपालीले...